"Maanta Aad Uguma Hamiyo Gool Dhalinta, Laakiin Waxaan Isku Dayaa..." Lionel Messi Oo Qirtay In Aanu Yoolkiisu Ahayn Goolal Uu Dhaliyo - Gool24.Net
“Maanta Aad Uguma Hamiyo Gool Dhalinta, Laakiin Waxaan Isku Dayaa…” Lionel Messi Oo Qirtay In Aanu Yoolkiisu Ahayn Goolal Uu Dhaliyo
Xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi ayaa sheegay inuu door bidiyo inuu kooxdiisa u caawiyo sida ugu fiican laakiin aanu si aad ah ugu hammiyin inuu kaliya goolal u dhaliyo.
Lionel Messi ahxiddiga ugu goolasha badan taariikhda Barcelona, waddankiisa Argentina toddobaadkan u dhaliyey goolkiisii 71aad 139 ciyaarood oo uu u saftay ayaa waraysi uu siiyey majaladda La Garmanta Poderosa waxa uu ku caddeeyey in marka uu garoonka ku jiro uu kaliya ka shaqeeyo sida ugu fiican ee ay kooxdu guul u gaadhi karto, balse aanu isagu ahayn mid isku hawla inuu goolal dhaliyo.
“Maanta, anigu aad uguma hamiyo inaan goolal dhaliyo.” Ayuu si kooban u yidhi Messi oo intaa ku daray: “Waxa aan isku dayaa inaan sida ugu wanaagsan u caawiyo kooxda.”
Kabtanka Barcelona waxa kale oo fursadda waraysiga uu uga faa’iidaystay inuu kaga hadlo dhibaatooyinka bulsho ee ka jira dunida iyo gaar ahaan midda waddankiisa ee ka dhalatay xanuunka Korona, waxaanu yidhi: “Sinnaan la’aanta ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn.”
Lionel Messi waxa uu hoosta ka xariiqay inay aasaasi tahay in qof walba uu helo biyo, laydh iyo cunto, gaar ahaan waqtigan ay aafada Korona Fayrasku jirto. Waxa kale oo uu kalmado xiddigaha ay xulka u wada ciyaaraan.
“Sharaf weyn ayay isiinaysaa marka aan arko sida dakdu ay uga qayb-qaadanayaan ee ay uga wada shaqaynayaan qolalka qadada iyo meelaha lagu xafladeeyo ee gudaha Argentina, xataa waqtiyadan adag ee aynu noolahay,” Ayuu yidh.
Intii uu xanuunkani jiray, Messi waxa uu sameeyey kaalmooyin shaqsi ah iyo mid uu sii mariyey jimciyaddiisa oo caawimooyin muhiim ah uu ku gaadhsiiyey cusbitaallo ku yaalla waddankiisa iyo Bagaalada Barcelona, taas oo ay waliba u dheerayd malaayiin lacag oo kale ah oo uu bixiyey.